August 2, 2020 - Bahuthutagabar
“မိနျးကလေးတှေ သတိပေးခငျြ လို့ ကိုယျခဈြ လညျး မရှာ နဲ့ သူခဈြလညျး မရှာပါနဲ့ လူစိတျရှိတဲ့ လူကိုပဲ ရှာကွပါ” (ဖွဈရပျမှနျ)
August 2, 2020 Bahuthutagabar 0
ကြှနျမသူငယျခငျြးက နှလုံးရောဂါ ရှိတယျ ကလေး ယူမရဘူးလို့ ဆရာဝနျမှာထားတယျ သူ့ယောကျကြားက ကလေးလိုခငျြတယျ ကလေးယူပေးလို့ ခနခနပွောတယျ။(4.12.2019) သူကိုယျဝနျရှိနပွေီး ကြှနျမနဲ့ပွောပွလာတယျ ကြှနျမကမယုံဘူးမယုံဘူး နငျငါရှမေ့ာဆီးစဈပွဆိုပွီး သူကစဈပွပေးတယျ ကြှနျမကပြျောလပြေျောတယျ စိတျလပေူတယျ သူက ကနျြးမာရေးမကောငျးဘူး ဆရာဝနျလကေလေးယူရငျအသကျအန်တရာယျရှိတယျလို့မှာထားတယျ ကြှနျမစိတျပူနမေိတယျ ကိုယျဝနျရှိနတေဲ့အကွောငျးသူယောကျြားနဲ့ သူပွောပွတယျ သူယောကျြားပြျောမယျလို့ထငျထားတယျ ဘယျဟုတျမလဲ […]
ရတနာပုံသီချင်းဖြင့် စောင်းအစွမ်းပြ တီးခတ်သီ ဆိုနိုင်သူ ပါရမီရှင် ကလေးငယ် (၂) ဦး(ရုပ်သံ)
“ဇမ္ဗူလက်ျာတောင်ကျွန်း… ဆုသွန်းမယ်အဖုံဖုံ… ဘေးဘယာအစုံ… ဝေးကြအ ကုန်….. ဇမ္ဗူလက်ျာတောင်ကျွန်း… ဆုသွန်းမယ်အဖုံဖုံ… ဘေးဘယာအစုံ… ဝေးကြအ ကုန်” ဒါကတော့ မြန်မာ့ ဂန္ထဝင်ဂီတပညာရှင် အလင်္ကာကျော်စွာ ရွှေပြည်အေးရဲ့ နာမည် ကြီး သီချင်းတပုဒ်ဖြစ်တဲ့ “ရတနာပုံ”သီချင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်သိန်းတန်အပါအဝင်..၊ အဆို တော်ပေါင်းများစွာက ပြန်လည်သီဆိုခဲ့ကြပြီး ခေတ်အဆက်ဆက် လက်ဆင့်ကမ်းသယ် […]
“အမျိုးသမီးတွေ အသက်ရလာရင် ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ အရိုးပွရောဂါကို ဒီနည်းလမ်းတွေနဲ့ ကာကွယ်ထားပါ”
“အမျိုးသမီးတွေ အသက်ရလာရင် ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ အရိုးပွရောဂါကို ဒီနည်းလမ်းတွေနဲ့ ကာကွယ်ထားပါ” ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံ အရရော၊ သဘာဝအရပါ အမျိုးသမီးတွေဟာ အသက်ကြီးလာရင် အမျိုးသားတွေထက် အရိုးပါး အရိုးပွရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေပိုများပါတယ် …. ။ အရိုးပါး အရိုးပွ ရောဂါဖြစ်လာရင် ကုသရ ခက်ခဲတာကြောင့် မဖြစ်ခင် ကြိုတင်ကာကွယ်ထားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ […]
“သောကြာသားသမီးလေးတွေရဲ့ သူမတူတဲ့ မွေးရာပါအားသာချက်တွေနဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက်(၁၀) မျိုး”
ရက်သတ္တပတ်တစ်ခုရဲ့ ငါးရက်မြောက်နေ့မှာ မွေးဖွားတဲ့ သောကြာသားသမီးလေးတွေဟာ ဗီးနပ်စ်ဂြိုလ်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာ ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ သောကြာသားသမီးလေးတွေမှာ သူများနဲ့မတူတဲ့ အားသာချက်နဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီအားသာချက်တွေကိုသာ ကောင်းမွန်စွာ အသုံးချနိုင်ရင်တော့ အောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာမှာ မလွဲဧကန်ပါပဲ (၁) သောကြာသားသမီးလေးတွေဟာ ငြိမ်းချမ်းခြင်း၊ လှပခြင်း၊ အချစ်နဲ့ သာယာခြင်းတွေကို ကိုယ်စားပြုကြပါတယ် (၂) […]
“မျက်နှာပေါ်က တင်းတိပ်တွေကို ပျောက်ကင်းစေမယ့် အိမ်တွင်း နည်းလမ်းများ”
မျက်နှာပေါ်က တင်းတိပ်တွေကို ပျောက်ကင်းစေမယ့် အိမ်တွင်း နည်းလမ်းများ…. တင်းတိပ် ဆိုတာ အရေပြားပေါ်မှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ အညိုရောင် အစက်အပြောက်များ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန် အရေပြား ပညာရှင်များ အဖွဲ့ရဲ့ အဆိုအရ ၎င်းဟာ အသားအရေ ပျက်စီးခြင်း လက္ခဏာ ဖြစ်ပါတယ် …။ တင်းတိပ် ဖြစ်ရခြင်း […]
ညနက်တဲ့အထိ အိပ်ယာထဲအထိ ဖုန်းသုံးခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးများ
ညနက်တဲ့အထိ အိပ်ယာထဲအထိ ဖုန်းသုံးခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးများ ကျန်းမာရေးပါရဂူကြီးများရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ လူသားတွေအတွက် အကောင်းဆုံး အိပ်စက်အနားယူချိန်ဟာ ည ၁၁ နာရီမှ မနက် ၃ နာရီအတွင်းဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ် …။ ဒီအဆိုကို ဆေးပညာရှင်များအားလုံးနီးကလည်း လက်ခံထားကြပါတယ်။ ၁၁-၃ အတွင်း အနားမယူပဲ အလုပ်တစ်ခုခု လုပ်နေမယ်ဆိုရင် […]
သင့်ချစ်သူကောင်လေးရဲ့ ရင်ကို တဒိုင်းဒိုင်း ခုန်သွားစေမယ့် အပြုအမူ(၇) မျိုး
သင့်ချစ်သူကောင်လေးရဲ့ ရင်ကို တဒိုင်းဒိုင်း ခုန်သွားစေမယ့် အပြုအမူ (၇) မျိုး ကိုယ့်ချစ်သူကောင်လေးရှေ့ ရောက်တဲ့ အခါ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အတူရှိနေချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် မထင်မှတ်ပဲ ပြုမူလိုက်တဲ့ ကိုယ့်လှုပ်ရှားမှု အပြုအမူတွေကြောင့် တစ်ဖက်လူမှာ စိတ်လှုပ်ရှားသွားရတာမျိုး၊ ရင်ခုန်သွား ရတာမျိုးတွေ ရှိတတ် ပါတယ်။ ဒီလို ဖြစ်ဖို့ ကိုယ့်ဘက်က […]
ညီမ ဖြစ်သူရှေ့ မှာ အိပ်ယာ ပေါ်က ကိစ္စ တွေပါ ချပြတော့မှာ လားလို့ ဝေဖန်မှု အပေါ် တုန်ပြန် လာ တဲ့ “ပိုင်ဖြိုးသု
ညီမ ဖြစ်သူရှေ့ မှာ အိပ်ယာ ပေါ်က ကိစ္စ တွေပါ ချပြတော့မှာ လားလို့ ဝေဖန်မှု အပေါ် တုန်ပြန် လာ တဲ့ “ပိုင်ဖြိုးသု” သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဖြိုးသု ကတော့ နိုင်ငံကျော် အကယ်ဒမီ မင်းသမီး တစ်လက်ဖြစ် သလို၊ ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ ပညာတတ် […]
စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း သင့်ကို လူတွေချစ်ခင်လာစေမယ့် နည်းလမ်းများ
စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း သင့်ကို လူတွေချစ်ခင်လာစေမယ့် နည်းလမ်းများ ရိုးရှင်းတဲ့ဒီနည်းလမ်းတွေကိုလိုက်လုပ်ကြည့်ပါ။ လူတွေသင့်ကို ၄ စက္ကန့်အတွင်း နှစ်သက်လာပါလိမ့်မယ် …။ အလုပ် အင်တာဗျူးတွေ ဖြေတဲ့အခါ သင့်ကိုစစတွေ့ချင်း လေးစားမှု အထင်ကြီးမှု ရအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာ ခက်ပါတယ်လူတွေသင့်ကိုမြင်တာနဲ့ ချက်ချင်းနှစ်သက်စေဖို့က စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်တယ် ။ အထူးသဖြင့်သင်က စိတ်လှုပ်ရှားလွယ်တတ်တဲ့ လူဆိုရင်ပေါ့ ။ […]
လူကြည့်များနေတဲ့ ရုရှားနိုင်ငံတွင်ယှဉ်ပြိုင်ပြီး ရွှေတံဆိပ်ဆွတ်ခူးခဲ့သည့် ညီအကို(၂)ဦးရဲ့ အက ရုပ်သံဖိုင်
နိုင်ငံပေါင်း ၂၀ ဝင်ရောက်ယှဉ် ပြိုင်ရာမှာ အမြင့်မားဆုံးရွှေတံဆိပ်နှစ်ခုကို ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှ အမွှာညီအစ်ကိုကတော့ ဒီတစ်ခါ ပရိတ်သတ်ကြီးကို ပျော်ရွှင်ရအောင် ဟာသအကဗွီယိုဖိုင်လေး ကပြလာပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတာလေးတွေကို ဟာသ အနေနဲ့ ဒီဗွီယိုဖိုင်လေးကို ဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်းကောင်းလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ပရိတ်သတ်ကြီး သဘောကျတယ် ဆိုရင် ရွှေညီကို ကို အားပေးတဲ့အနေနဲ့ […]